Ezemfundo – Elitsha
23rd May 2018 Phinda Kula 0
15th May 2018 Phinda Kula 0
Kulindeleke ukuba avele enkundleni ka mantyi kungentsuku zatywala utishala otyholwa ngokudlwengula umfundi kwisikolo samabanga aphakamileyo eHermanus.
28th March 2018 Phinda Kula 0
Uvavanyo lwesifo sephepha luyaqhubeka kwizikolo zaseKhayelitsha ukuzama ukuthintela esi sifo nezinye evame ukuhamba nazo.
Imbongi yosiba nomdlali weqonga ohlala eKhayelitsha uthi ukuzazi ukuba ungubani kubalulekile
12th October 2017 Phinda Kula 0
Nangona seyidlulile inyanga yenkcubeko namagugu, eliphephandaba lithathe isigqibo sokuba sizakuthi gqolo ukubhala ngabantu abazingcayo ngenkcubeko namagugu. Kule veki sithethe nomdlali weqonga nembongi yosiba u Anele Pendze osibalisele ngamajingi-qhiwu obomi ezama ubomi.
22nd September 2017 Chris Gilili 0
“Inkululeko endiyifumanayo xa ndibhala isiXhosa kunye nentsingiselo yamagama ingunobangela wokuba ndibhale ngesiXhosa,” itsho intwazana eyimbongi yosiba eyinzalelwane yaseDutywa eMpuma Koloni. UPumza Sibindi nowaziwa ngelika “MaDiya” […]
15th September 2017 Chris Gilili 0
Uqalile umnyhadala wezenzululwazi kuzwelonke
8th August 2017 Mzi Velapi 0
Uqalile umnyhadala waminyaka le othi uphakamise kwaye uyindlela yokukhuthaza abantwana besikolo noluntu ngokubanzi ukuba bazibandakanye ngezobu nzululwazi. Lomnyhadala kazwelonke uthi uquke ezobunzululwazi, ulwazi ngezobugcisa, ezobunjineli, […]
Libinze ngoncedo kwizikolo isebe lezemidlalo nenkcubeko
26th June 2017 Chris Gilili 0
Nanjengokuba isaqhubeka imibhiyozo yenyanga yolutsha eMzantsi-Afrika isebe lezemidlalo nenkcubeko kwiphondo le Mpuma-Koloni lizeke emzekweni kumsitho ububanjelwe kwiholo yoluntu iGompo Community Hall nalapho belinikezela ngezipho kulutsha. […]
Bafundela kumagumbi ethutyana kwa-Faku
21st June 2017 Nonzukiso Pitsha 0
Banikwe izindlu zokufundela zethutyana abafundi besikolo samabanga aphantsi bakwa Faku kwilokishi yase Lower Crossroads eKapa . Oku kusemva kokuba abazali ababevutha ngumsindo basivala esisikolo ngomhla […]
Bafuna inkxaso kwezemidlalo eNontombi Matta eMdantsane
29th November 2016 Chris Gilili 0
Umahluko usemkhulu kakhulu kumgangatho, xa kufikelelwa kwezemidlalo kwizikolo eziselokishini kunye nezo zifumaneka edolophini. Zininzi izinto eziluphawu lwalento.